नेपाल आइडलको अडिशन सुदूरपश्चिममा किन गरिएन ? आयोजकको प्रस्टोक्ति | Kendrabindu Nepal Online News
1584955 94720 1141421 348814
नेपाल आइडलको अडिशन सुदूरपश्चिममा किन गरिएन ? आयोजकको प्रस्टोक्ति
५ आश्विन २०७६, आईतवार १८:०१
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिशन सुदूरपश्चिममा आयोजना नगरिएकोबारे प्रस्ट पारिएको छ । सिजन २ को विजेता रवि ओड सुदूरपश्चिम प्रदेशकै भएर पनि अडिशन नराखिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला आयोजकले त्यसबारे प्रस्ट पारेको हो ।
प्रत्येक वर्ष फरक फरक क्षेत्रमा अडिशन गर्ने नेपाल आइडलको नीति अनुसार सुदूरपश्चिममा नगरिएको ए.पी वान टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए । ‘हाम्रो नीतिमा एक वर्ष एक ठाउँमा अडिशन गरेपछि अर्को वर्ष त्यो ठाउँमा गरिदैन् । प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ क्षेत्रमा अडिशन गरिन्छ ।’ पौड्यालले भने ।
ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङसँग गरिएको कार्यक्रम सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी पौड्यालले काठमाडौं र पोखराबाहेक अरु ठाउँ परिवर्तन हुने भएकाले अघिल्लो वर्ष धनगढीमा गरिएको तर यो वर्ष नेपालगञ्जमा हुने स्पष्ट पारे ।
काठमाडौंको होटल ए लोफ्टमा आयोजित विश्व भ्रमण कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलनमा ग्रीष्मासँग कार्यक्रम सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतामा ए पी वान टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक पौड्याल र ग्रीष्माका तर्फबाट सीईओ गृहेन्द्र घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए । अब नेपाल आइडल सिजन ३ बाट सिजन ५ सम्म ग्रीष्माले सहकार्य गर्नेछ ।
अब ग्रीष्माले नेपाल आइडलका बिजेताहरुको विश्व भ्रमणमा सहयोग गर्ने सीईओ गृहेन्द्र घिमिरेले बताए । नेपाल आइडलसँग सहकार्य गर्न पाउँदा जोखिम नभई एकदमै उत्साहित रहेको बताए ।
नेपाल आइडल सिजन ३ को दुई ठाउँमा अडिशन भइसकेको छ । असोज ३ गते पोखरामा अडिशन भएको थियो । भने असोज ४ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको थियो । दुई संस्करण सफलताका साथ सम्पन्न गरेको नेपाल आइडल नेपालको सबैभन्दा ठूलो गायन रियालिटी शो हो । नोभेम्बर ९ गतेबाट तेस्रो संस्करण एपी वानबाट प्रशारणमा आउनेछ ।
अहिले चलिरहेको लोक गायन रियालिटी शो आएमई लोक स्टार प्रतियोगिता सम्पन्न भएसँगै सुरु हुने एपी वानले जनाएको छ । नेपाल आइडल सिजन १ को उपाधी पोखराका बुद्ध लामाले जितेका थिए भने दोस्रो संस्करणको उपाधी कञ्चनपुरका रवि ओडले जितेका थिए ।
AP 1, Nepal idol, नेपाल आइडल सिजन–३
Prevपुडासैनी प्रकरणमा साक्षीको बकपत्र
प्रेमको यस्तो रूप जुन हरेकको अन्तर्मनले चाहेको हुन्छ !Next
नेपाल आइडल विजेता रबि ओडले ल्याए ‘दिलको फ्रेममा’
नेपाल आइडल विजेता रबि ओडको पहिलो गीत सार्वजनिक
नौलो अभ्यासः रबि ओडको सांगीतिक कार्यक्रममा राउटे बने प्रमुख अतिथि
‘सालको पात..’ विवाद र कानूनी प्रावधान
आमाको वियोगमा रहेका रबि ओडको मनै रुवाउने साहित्य
नेपाल आइडल विजेता रबि ओडकी आमाको करेन्ट लागेर मृत्यु
कोरोना नियन्त्रण गर्ने सामग्री आयातमा भ्रष्ट्राचार नभएको ओम्नी समूहको स्पष्टोक्ती
पत्रकार र विद्यार्थीलाई राप्रपाको सहयोग
प्रहरीको तलव काट्न लागेको भन्दै ब्यापक आलोचना (भिडियोसहित)
भक्तपुर साहित्यिक समाजले आयोजना गर्यो भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत गोष्ठि
लकडाउन कार्यान्वयन गर्न म्यादी प्रहरीदेखि जरिवानासम्म (भिडियोसहित)
कोरोनालाई जितेका नेपालीहरूको अनुभव (भिडियोसहित)
लकडाउन प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीको यस्तो सक्रियता (भिडियोसहित)
कोरोना भाइरसको महामारी पुनः फर्कन सक्ने भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिको चेतावनी (भिडियोसहित)
भारतको सरकारी रेल सेवाद्वारा ‘मास्क’ र ‘सेनीटाइजर’ उत्पादन
उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने सूचना प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले 'लिक' गरेको खुलासा